Maalin kasta, qiyaastii 780 000 oo qof rumaysadka Ciise!
Marna ha ka hor taariikhda ayaa aad u badan oo la badbaadiyey oo dunida dacaladeeda ah in aannu mar. Waxaan ku noolnahay waqti marka dalagga ee dunida ugu weyn ay Quito ee!
Qaar badan ayaa ku mashquulsan sugitaanka qashinka weyn ee waqtigeena. Tixgelinnada nooleenta ay qayb ka, waxaa gebi ahaanba laga saaray. Laakiin, gacaliyayaalow, Kaasu wuxuu noqday generalfel ah. Waxaa soo nooleenta weyn ee dunida hadda! Marna ha ka hor taariikhda ay leeyihiin dad badan oo la badbaadiyey sida ay hadda tahay. Qiyaastii ilaa 780 000 oo qof ay aqbalaan Ciise iyo badbaadi maalin kasta oo dhulka ku wareegsan oo!
Sure, waxaa kale oo hoos qashinka a of our time, in aan wax ka ogaado, laakiin qashinka indha la 'ma taagni dhexdiisa, laakiin ku farxa in dad badan oo soo galay boqortooyada Ilaah maalin kasta. Mararka qaarkood waxaan u malaynayaa in oo ka mid ah Rasuullada waqti Ciise waa naga mid ah masayr maanta kuwaas oo qayb ka ah waqtigan taariikhiga noqon doonaa in aannu hadda ku nool. Waqtiga marka dalagga ee dunida ugu weyn ay Quito ee!
maanta aduunka ee soo nooleenta socda
Marna ha ka hor taariikhda ayaa aad u badan oo la badbaadiyey adduunka oo dhan sidii ay u dhacaya in aannu mar. Maalin kasta, qiyaastii 780 000 oo qof rumaysadka Ciise!
Waxaan filaynaa in maanta halkaas ku saabsan 2.5 billion Masiixiyiinta ah ee dunida jira.
70% oo ka mid ah ayaa u yimid in iimaanka miyir lagu jiro 1900, samaynta 1.75 billion.
Kuwaas oo kala ah, 1.75 billion, 70% oo ka mid ah ka iman rumaysadka ka dib markii 1945, taas oo macnaheedu yahay ku saabsan 1.2 billion.
Kuwaas oo kala ah, 1.2 bilyan oo daba 1945 aaminsan yahay, 70% la aaminsan yahay in saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Tani waxay ka dhigan tahay in oo ku saabsan 857 milyan oo la rumeysan yahay saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Tani waxay ka dhigan tahay in oo ku saabsan 285 milyan oo rumaystay kasta oo ka mid ah saddexdii sano ee la soo dhaafay iyo soo kabashada sii.
Waxba ma ahan wixii aad ayaa baaraya, waxa aad ogaatay in uu kordho xoogga u xuub in aannu mar ah.
Source: Facebook - Nils Gunnar Lönnegren
780 000 maalin kasta
Haddii aan la xisaab u gaar ah ee qarnigii sii, 285 million badbaadi doontaa sanad kasta si ay noqon doontaa:
23.7 million badbaadiyey bil kasta
5.5 million toddobaad kasta ku badbaadi
780 000 maalin kasta ku badbaadi
Waxaan ku jirnaa nooleenta ee dunida ugu weyn! Marna ha ka hor taariikhda ayaa aad u badan oo la badbaadiyey adduunka oo dhan sidii ay u dhacaya in aannu mar.
Vecka 19, söndag 16 maj 2021 kl. 05:56